यी ६ अभिनेत्री जो निकै सुन्दर भएर पनि अहिलेसम्म कुमारी नै छन्! | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
यी ६ अभिनेत्री जो निकै सुन्दर भएर पनि अहिलेसम्म कुमारी नै छन्!
मुम्बई – बलिउड झै लोकप्रिय छ साउथ फिल्म उद्योग पनि । त्यहाँका अभिनेत्री पनि निकै हट एण्ड सेक्सी देखिन्छन् । सोही कारणले उनीहरुलाई चाँहने प्रशंसक बिश्वभर छन् । आज चर्चा साउर्थ फिल्म उद्योगका ति ६ अभिनेत्रीको गर्न खोजिएको छ । जो निकै सुन्दर छन्, तर पनि अहिलेसम्म कुमारी नै छन् ।
साउथको सुन्दर अभिनेत्रीको लिष्टमा राशिको नाम अग्रपंतिमा आउँने गरेको छ । बलिउड फिल्म ‘मंद्रास क्याफे’मा पनि उनले काम गरेकी थिइन् । उनी अहिलेसम्म कुमारी छन् ।
साउको एकसेएक सफल फिल्ममा कीर्तिले काम गरेकी छन् । उनले मुख्य हिरोइनबाट नै साउथ अभिनय करियर सुरु गरेकी थिइन् । मलयालम फिल्मबाट भने उनले अभिनय करियर सुरु गरेकी हुन् । उनी निकै सुन्दर छिन् । अहिलेसम्म कुमारी पनि ।
साउथ उद्योगकी चर्चित अभिनेत्री तमन्नाले थुप्रै हिट फिल्म दिएकी छन् । बलिउड फिल्ममा समेत काम गरेकी तमन्नालाई चर्चित तुल्याउने काम भने साउथ उद्योगले गर्यो । तमन्नाको सुन्दरताको लाखौ दिवाना छन् । उनी पनि अबिबाहित अभिनेत्री हुन् ।
काजलले अहिलेसम्म ३० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छन् । ४ बलिउड फिल्ममा काम गरेकी उनको सुन्दरताको चर्चा साउथ र बलिउड दुबै तिर हुने गरेको छ । उनी पनि कुमारी अभिनेत्रीको लिष्टमा पर्ने गरेकी छन् ।
साउथका सबैभन्दा चर्चित अभिनेत्रीमा पर्दछिन् रकुल प्रीत सिंह । उनले बलिउड फिल्ममा पनि काम गरेकी छन् । उनी पनि निकै सुन्दर छिन् ।
साउथ फिल्मको सुन्दर अभिनेत्री तथा गायिका नित्या मेनन पनि अहिलेसम्म कुमारी छिन् । उनले धेरै भाषाको फिल्म अभिनय गरेकी छन् ।